စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ကသာခရိုင် ထီးချိုင့်မြို့နယ် အင်ဒေါင်းကျေးရွာတွင် အသက်(၅၃)နှစ်အရွယ်ဖခင်အရင်းဖြစ်သုမှ အသက်(၃၅)နှစ်အရွယ်သမီးဖြစ်သုအားအကြိမ်ကြိမ်သားမယားအဖြစ်ပြုကျင့်ခဲ့သဖြင့်ဥပဒေနှင့်အညီအရေးယူထားခဲ့သည်။ ဖြစ်ပွါးပုံမှာ ထီးချိုင့်မြို့နယ် အင်ဒေါင်းကျေးရွာတွင် ဦးအောင်ထွန်းသည်သားသမီးများဖြစ်သော မအုန်းမြင့်(ခ)ဇာဇာခိုင်(၃၅)နှစ်၊မအုန်းဆင့်(၃၁)နှစ်၊မောင်လှမျိုး(၁၆)နှစ်၊မနေခြည်ရွှန်းလဲ့(၁၃)နှစ်တို့ နှင့်အတူနေထိုင်ကာတောင်သူလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်စားသောက်နေထိုင်ခဲ့ကြသည်။ ၂၀၁၉ ခုနှစ် ဧပြီလ(၂၇)ရက်နေ့ တွင်ကလေးဝမြို့နယ်နေ ဦးအောင်ထွန်း၏သားဖြစ်သူကျော်ထက်အောင်နှင့်ဇနီးမသူဇာဝင်းတို့ အလည်လာရောက်ခဲ့ကြပြီးနောက်မအုန်းဆင့်နှင့်ကျော်ထက်အောင်တို့ သည်ဖခင်ဖြစ်သူဦးအောင်ထွန်းနှင့်အမဖြစ်သူမအုန်းမြင့်(ခ)ဇာဇာခိုင်တို၏အနေအထိုင်အပြုအမူတ်ို့ အပေါ်မသင်္ကာသဖြင့်မအုန်းမြင့်(ခ)ဇာဇာခိုင်အားခေါ်ယူမေးမြန်းခဲ့ကြသည်။ မအုန်းမြင့်(ခ)ဇာဇာခိုင်၏ဟြေကြားချက်အရလွန်ခဲ့သော(၆)လခန့် မှစ၍၎င်းအားဖခင်ဖြစ်သူဦးအောင်ထွန်းမှသားမယားအဖြစ်ပြုကျင့်ခဲ့ကြောင်း၊နေအိမ်တွင်လူရှင်းသည့်အခါများတွင်လည်းအကြိမ်ကြိမ်သားမယားပြုကျင့်ခဲ့သည့်အပြင်ကြံ ခင်းတဲနှင့်နွားကျောင်းသွားသည့်ကန်ကုန်းတောနေရာများတွင်လည်းအကြိမ်ကြိမ်သားမယားအဖြစ်ပြုကျင့်ခဲ့ရာယခုအခါကိုယ်ဝန်ဆောင်ထားရပြီဖြစ်ကြောင်းဟြေပြခဲ့သည်။ ထို့ ကြောင့်မအုန်းဆင့်မှအင်ဒေါင်းကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးထံအကြောင်းကြားပြီးဆွေမျိုးများနှင့်တိုင်ပင်ကာ မေလ(၆)ရက်နေ့ ညနေ(၄)နာရီ(၁၅)မိနစ်အချိန်တွင်မအုန်းဆင့်မှတရားလိုပြုလုပ်၍ထီးချိုင့်မြို့မရဲစခန်တွင်အမှုဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်။ ထို့ ကြောင့်သမီးအရင်းဖြစ်သူအားသားမယားအဖြစ်အကြိမ်ကြိမ်ပြုကျင့်သူဦးအောင်ထွန်း(၅၃)နှစ်(ဘ)ဦးတင်လှိုင် …
မော်တော်ယာဉ်(၁၇)စီးဖြင့် တင်ဆောင်လာသည့် ကျောက်စိမ်းတန် (၃၀၀)နီးပါး သိမ်းဆည်းရမိ …
မော်တော်ယာဉ်(၁၇)စီးဖြင့် တင်ဆောင်လာသည့် ကျောက်စိမ်းတန် (၃၀၀)နီးပါး သိမ်းဆည်းရမိ … ကချင်ပြည်နယ်၊ မိုးညှင်းမြို့နယ်၊ နန့်ပုတ်ကျေးရွာအနီးမှာရှိတဲ့ မြို့ရှောင်လမ်းမှာ မေ ၂ ရက်နေ့ ညနေပိုင်းက မော်တော်ယာဉ် (၁၇)စီးနဲ့ တရားမဝင်တင်ဆောင်လာတဲ့ ကျောက်စိမ်းအရိုင်းတုံး(၁၀၀)၊ တန်ချိန်(၂၈၈)တန်ကို သိမ်းဆည်းရမိခဲ့ပြီး မေ(၅)ရက်မှာတော့ အမှုဖွင့်အရေးယူဖို့ စီစဉ်နေတယ်လို့ မိုးညှင်းမြို့မရဲစခန်းကနေ သိရပါတယ် …။ အဲဒီသိမ်းဆည်းရမိတဲ့ ကျောက်စိမ်းအရိုင်းတုံးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး စစ်ဆေးမေးမြန်းတဲ့အခါမှာ …
ရင်သားသေးလို့ အားမရဘူးလား။ ဒါမှမဟုတ် တင်းရင်းမှုမရှိဘဲ ပျော့ပျော့ကြီးဖြစ်လို့ စိတ်ညစ်နေလား?ဒီလိုပြဿနာမျိုးနဲ့ ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ ပျိုမေတို့အတွက် နည်းလမ်းကောင်းလေး တစ်ခုပဲ ပေးမယ်နော်။ အဲ့ဒါကတော့ ဝယ်ရလည်းလွယ်၊ အလွယ်တကူလည်း ရရှိနိုင်တဲ့ သံလွင်ဆီပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သံလွင်ဆီဟာ ရင်သားတွဲကျတာအတွက်တော့ အကောင်းဆုံး နတ်ဆေး ပါပဲ။ သူ့မှာ antioxidants နှင့် fatty acid ပေါကြွယ်ဝတာကြောင့် ရင်သားတွဲကျမှုဖြစ်နေတာတွေကို …
သင့်အိမ်မှာ သရဲရှိကြောင်း ပြနေတဲ့ လက္ခဏာ (၁၀) ရပ်
သင့်အိမ်မှာ သရဲရှိကြောင်း ပြနေတဲ့ လက္ခဏာ (၁၀) ရပ် သင့်ကို တစုံ တဦး စောင့်ကြည့် နေသည် ဟူသည့် ခံစားချက်မျိုး ဖြစ်ပေါ်ဖူးပါ သလား။ သို့မဟုတ် ရုတ်တရက် အပူချိန် ပြောင်း လဲသွား ခြင်းမျိုး ခံစားဖူး ပါသလား။ ပရလောက သုတေသီတို့၏ အဆိုအရ ယင်းလက္ခဏာ များသည် သင်၏ …
ဒီနေ့ အွန်လိုင်းပေါ်မှာ ဝေဖန်မှုတွေများနေတဲ့ လူမြင်ကွင်း ကားပေါ်က လင်မယားပါဆိုတဲ့ ဗွီဒီယိုဖိုင်
လူမြင်ကွင်း ကားပေါ်မှာ ရဲများရဲ့ စစ်ဆေးခြင်းကိုခံခဲ့ရတဲ့ လင်းမယားပါဆိုတဲ့ ပို့တစ်ခုကြောင့် ဝေဖန်မှုတွေအမျိုးမျိုး ထွက်ပေါ်နေပါတယ်..။ အဆိုပါ ဝေဖန်မှုများရဲ့ ဆန့်ကျင်ဘက် နှစ်ခုကို တင်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ ကားပေါ်မှာ အတွဲမိတဲ့ Video ကို Share ပြီး လှောင်သလိုလိုပြောင်သလိုလို ဟာသလုပ်သလိုလို တင်တဲ့သူမှန်သမျှ ကျွန်တော် unfriend လုပ်ပါမယ် လူ့ကျင့်ဝတ်သိက္ခာမရှိတဲ့သူတွေနဲ့ ကျနော် ခင်လဲမခင်ချင်သလို ပတ်လဲမပတ်သတ်ချင်ပါဘူး …
ကံကောင်းချင်တယ်ဆိုရင် နေထိုင်ကျင့်ကြံသင့်တဲ့ နည်းလမ်း ( ၇ ) မျိုး
ကံကောင်းချင်တယ်ဆိုရင် နေထိုင်ကျင့်ကြံသင့်တဲ့ နည်းလမ်း ၇ မျိုး 1. Live in the present ပစ္စုပ္ပန်မှာပဲကိုယ့်စိတ်ကို နှစ်ထားပါ သင့်မှာရှိတာ ပစ္စုပ္ပန်တခုထဲဆိုတာ မမေ့ပါနဲ့ အတိတ်ဆိုတာ ပြီးသွားပြီ အနာဂတ်ဆိုတာ မရေရာတာတွေနဲ့ မရောက်လာသေးပါဘူး သင့်လက်ရှိ ပစ္စုပ္ပန်ကိုပြောင်းလဲနိုင်မှ သင့်ဘဝကို ပြောင်းလဲနိုင်မှာ 2. Show kindness တပါးသူကို မေတ္တာထားပါ …
နေကြာစေ့စားသုံးခြင်းဖြင့် ရရှိလာမယ့် အံ့မခန်းအကျိုးကျေးဇူး (၁၀)မျိုး ။
နေကြာစေ့ဟာ မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုရင် အလွယ်တကူ ရရှိနိုင်သလို လူတိုင်းနီးပါးကြိုက်တဲ့ အစားအစာဖြစ်ပါတယ်။ နေကြာစေ့ဟာ ဗီတာမင်နဲ့ သတ္တုဓာတ် ကြွယ်ဝစွာပါဝင်တာကြောင့် ခန္ဓာကိုယ်အတွက် အရမ်းကိုကောင်းမွန်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း တန်ဆေးလွန်ဘေးဆိုတဲ့ စကားအတိုင်းပဲ အလွန်အကျွံမစားဖို့တော့ လိုပါတယ်။ (၁) နေကြာစေ့ဟာ နှလုံးကို ကျန်းမာစေတာကြောင့် နှလုံးသွေးကြောနဲ့ ဆိုင်တဲ့ရောဂါတွေကို သက်သာပျောက်ကင်းစေသလို၊ မဖြစ်အောင်လည်း ကြိုတင်ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ် (၂) နေကြာစေ့ဟာ သတ္တုဓာတ်ကြွယ်ဝစွာပါဝင်တာကြောင့် …
မိန်းမရဖို့ ကြိုးစားနေတဲ့ တရုတ်အမျိုးသားတစ်ဦးရဲ့ ကြိုးစားအားထုတ်မှုကတော့ တကယ့်ကိုပဲ ချီးကျူး လောက်ပါတယ်။ သူဟာ ချစ်ရေးဆိုခြင်း အကြိမ်ရေ ရှစ်သောင်းကျော် အငြင်းခံခဲ့ရပေမယ့်လည်း မိန်း မယူနိုင်ရမယ်ဆိုတဲ့ သူ့ရဲ့ အိပ်မက်ကို အလွယ်တ ကူမဖျက်စီးရက်ဖူးလို့ ဆိုပါတယ်။ ဒါဟာ တကယ့်ကို ဇွဲသန်တဲ့ စိတ်ဓာတ်ပါပဲ တရုတ်အမျိုးသားဟာ သူနဲ့သင့်တော်ပြီး လက်ခံပေးမယ့် အမျိုးသမီးတစ်ဦးကို ရှာဖွေဖို့အတွက် နှစ်ပေါင်းအတော်လေးကြာ …
နင်နဲ့ငါ လင်မယားလိုနေရအောင်ပြောပြီး ခြောက်နှစ်သမီး သားမယားပြုကျင့်ခံရ ( ရုပ်သံ )
ခြောက်နှစ်သမီးငယ်ကို သားမယားပြုကျင့်ခံရသဖြင့် ထိရောက်စွာ အမြန်ဆုံးအရေယူပေးစေရန် မိဘနှစ်ပါးကဆို စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ရွှေဘိုခရိုင်၊ တန်ဆည်မြို့နယ်၊ ရွာရှည်တောင်ကျေးရွာအုပ်စု၊ သရက်ကုန်းကျေးရွာတွင် အသက်(၆)နှစ်သမီးငယ် အိမ်အောက်တွင် အိပ်နေစဉ် တရွာတည်းနေ မောင်အောင်ချမ်းဦးဆိုသူ (၁၅)နှစ်ခန့်က ၄-၂-၂၀၁၉ ရက်နေ့က သားမယားပြုကျင့်ခဲရာ သက်ဆိုင်ရာသို့ တိုင်ကြားထားသော်လည်း အရေယူဆောင်ရွက်မှု အားနည်းနေကြောင်း ဧပြီလ ၂၉ ရက်နေ့က မိဘနှစ်ပါးဖြစ်သူ ကိုစိုးလင်းထိုက်+မသင်းသင်းဦး တို့က …
တကယ်လို့သာ ၁။ တကယ်လို့ မင်း နှစ်သက်တဲ့ လူတစ်ယောက်ကို မက်ဆေ့ခ်ျပို့လို့ တော်တော်ကြာကြာ စောင့်ပြီး ပြန်မလာဘူးဆိုရင် …ထပ်မပို့ပါနဲ့တော့…သူ မင်းကို ဂရုမစိုက်လို့ပါ…. အပင်ပန်းခံပြီး မစောင့်ပါနဲ့တော့ ၂။ တကယ်လို့ တစ်ယောက်တည်း ၀မ်းနည်းတဲ့အခါ…အခန်းထောင့် တစ်နေရာ (သို့မဟုတ်) အိပ်ရာထဲမှာလှဲပြီး ငိုချလိုက်ပါ… ကိုယ်ချင်းစာ သနားပေးမဲ့သူကို လိုက်မရှာနေပါနဲ့…. ငိုပြီးတာနဲ့ ပျော်ရွှင်စွာ အသက်ဆက်ရှင်ပါ …